Iyo Yakavanzika Bindu, iro basa raFrances Hodgson Burnett | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fantasy, marudzi, Vechidiki Mabhuku, Novela
Iyo yakavanzika gadheni, bhuku.
Bindu rakavanzika (Iro Chakavanzika Bindu muChirungu) ndeimwe yenhau dzinonyanya kukosha dzevana dzemunyori weBritish Frances Hodgson Burnett. Pakutanga basa rakadaidzwa Mai Mary, asi ipapo zita rakachinjwa. chinyorwa chakanyorwa muna 1910. Pakutanga, chakaburitswa muzvidimbu mumapepa madiki. Yakanga isati yasvika kusvikira muna 1911 apo yakabudiswa muudzame hwayo. Mazhinji edhisheni ayo ane mifananidzo yakanaka inowedzera zvemashiripiti kune yega yega nhanho.
Basa racho rakanyatsonyorwa, riine mutauro wakapusa uri nyore kuti vana vanzwisise. Asi panguva imwe chete iine mamiriro ekuti vanhu vakuru vanokwanisawo kunakidzwa vasina bhuku rinomiririra kufinhwa. Mubasa, munyori anotaura zvemashiripiti nenzira yechokwadi, izvi zvichitsanangurwa sekutsunga kunoita zvisikwa kuisa zvinhu munzvimbo yazvo. mabvazuva Iri ibhuku rekupemberera kuverenga pakati pevadiki nevakuru.
1.2 Mary nechirwere chekorera
1.4 Kusangana naMartha
1.5 Nzvimbo yemashiripiti
Iyi yekunakidzwa kwevana yakagadzirirwa mudunhu reYorkshire. Mubhuku, iyo nzvimbo inoitikira nyaya iri mune imwe imba kumusoro kwemoor, uko miti nemhuka zviri chikamu chemufaro. Nekudaro, mhuka idzi zvakare chikamu chezvidzidzo zvinodzidziswa nevanyori.
Mary nechirwere chekorera
Nyaya inotanga apo Mary Lennox Craven, anogara kuIndia uye anorasikirwa nevabereki vake nekuda kwechirwere chekorera. Munhu wese ari mumba make anofa kusara kwake. Mary, anongova musikana ane makore mapfumbamwe ekuberekwa, haana kuvhunduka paanoona izvo zvaitika, nekuti ndiye muridzi wehunhu hunodzvinyirira, hune hutsinye uye hune hutsinye.
Vabereki vake havana kumbowana nguva yekumupa rudo runodiwa nemwana wese., uye nekuda kwechikonzero ichocho, anoita semunhu anodzvinyirira anodzvinyirira.
Mushure mekufa kwevabereki vake, iye anomuchengeta, uye vazhinji vevaranda vake, Mary Lennox anoendeswa ku Misselthwaite Manor, muYorkshire. Musikana anoona kuti imba yake nyowani imba hombe ine magadheni akanaka.
Munhu wekutanga waanobata naye ndiMai Medlock, vanoomerera uye vasingafadzi.. Mai Medlock vanoudza Mary kuti asavhiringidze babamunini vake, VaArchibald Craven, murume akasurukirwa, ane shungu uye anovava uye haambofi ari mumba.
Paakasvika kuimba yemba, Maria anosangana naMarita, mushandi wemba. Pakutanga havawirirani, semaitiro aMaria anoita kuti asafadze, asi nekufamba kwenguva vanova shamwari dzakanaka. Marita anotaurira Maria nezve hupenyu hwake padenga, nezvaamai vake nevanin'ina vake gumi nevaviri, pakati pavo pana Dickon, jaya rinodakadza uye mudziviriri mukuru wemhuka, uyo anounza kufarira kwakawanda muna Maria. Musikana uyu aisada vanhu kusvika asangana naMartha nemunin'ina wake.
Rimwe zuva Marita anovimbisa Mary kuti aende kunoshanyira moor nekufema mweya wakanaka. Gare gare, Mary anosangana nemurume wekare wemu gadheni, Ben Weatherstaff, uye robini uyo anomuratidza nzira inoenda kubindu rine masuo akavharwa makore gumi apfuura uye hapana anotenderwa kupinda. Kubva ipapo, Mary anoedza kutsvaga kiyi uye ane akati wandei maficha neshamwari dzake nyowani.
Pakutanga kwerangano Maria musikana anozvifunga, mutete akashata, anozvibata uye akapambwa iyo inherera uye inoendeswa kuEngland kunogara nababamunini mune imwe imba hombe pane moor.
Nekufambira mberi kwenyaya uye zviitiko zvakatsanangurwa nemunyori, Mary ari kuve munhu ari nani, akasimba, munyoro uye akanaka.. Iye anoenda kune imwe yeakanyanya kukosha shanduko yepfungwa munhoroondo.
Iye musikana ane moyo wakanaka uye anofara kuti anoshanda kuimba yemba semubatsiri waMai Medlock. Hupenyu hwake hwakaoma, nekuti anoshanda nesimba kubatsira mhuri yake. Marita anova shamwari dzepedyo naMaria uye ndemumwe wevanhu vanoshandisa nguva yakawanda nemusikana. Izvi zvakaita kuti Mary asiye hunhu hwake hunorwadza kumashure.
Ndiye mumwe wehama dzaMarita gumi nembiri. Dickon murume akanaka mukomana, ane mutsa uye akanaka kwazvo nemhuka. Anotsanangurwa sekunaka kwechisikigo, kurima zvirimwa mubindu uye kubatsira mhuka. panjodzi. Iye muchengeti mukuru akavanzika uye shamwari yaMaria.
Ndiye chete mwana waArchibaldd Craven nemukadzi wake akafa, Lilias Craven. Colin jaya rinorwara, rinovava uye risina kusimba iro rinogara rakavharirwa mukamuri rake mune imba yababa vake.
Anozvibata sa rajah, achipa mirairo kuvashandi. Zvisinei, Paanosangana naMary naDickon, maitiro ake anochinja uye anova mukomana ane mutsa, akasimba uye akasimba kwazvo..
Zvichienderana neshanduro, rangano inoitika pakati pegumi nemasere kana makumi maviri neshanu zvitsauko zvizere nezviitiko zvinoshamisa uye zvisinganzwisisike. Iyo nyaya inotanga nehupenyu hwaMary Lennox muIndia. Akaregeredzwa uye kusakosheswa nevabereki vake, Mary akaterera zvine shungu., uye maitiro aya akamutsanangudza kusvikira aifanira kutamira kuEngland, uko kwaakasangana nevanhu vane nharaunda dzakasiyana dzehukama uye hwepfungwa.
Izvo zvitsauko zvipfupi uye zviri nyore kuverenga, uye sezvo adventures achifambira mberi, saizvozvowo hunhu hwevatambi. Pakutanga zvinenge zvisingaite kufungidzira kuti imwe yevatambi chikamu che network yemhedzisiro, imwe pamusoro peimwe. Iri bhuku rinodzidzisa tsika dzehukama, kukosha kwemutsa uye nzira iyo zvisikwa zvinokura nerumwe rudo uye hanya.
Mutsara naFrances Hodgman Burnett.
Iri harisi chero bhuku ripi zvaro revana rine mavara akajeka emashiripiti. The magic of Bindu rakavanzika inotarisa kushanduka kwevanyori yakanamatira kune iyo chaiyo shanduko yemwaka, chirimo ichive chiri chepamusoro chekukura uku, kwega, kwemuviri uye kwepfungwa. Basa rakaomarara, kuisa parutivi makirasi enharaunda uye kuremekedza zvese zvinorarama zvakare chikamu chemashoko ebasa iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Iyo Yakavanzika Bindu, naFrances Hodgson Burnett